I-Auphonic: Lungiselela i-Podcast Audio yakho ngokuchofoza okukodwa | Martech Zone
I-Auphonic: Lungiselela i-Podcast Audio yakho ngokuchofoza okukodwa
NgoLwesihlanu, Mashi 17, 2017 NgoMsombuluko, Septemba 4, 2017 Douglas Karr
Lapho sakha eyethu Umphakathi waseMartech, besazi ukuthi kuzobaluleka kwinethiwekhi yethu enkulu yabafundi ukuvuselela nokwabelana ngolwazi abalutholile. Lapho ngibhala ngomsindo we-podcast, Temitayo Osinubi wabelane ngethuluzi elimangalisayo elibizwa nge- I-Auphonic. Ngaphandle kokuthi ungunjiniyela womsindo, ukufaka umsindo kuma-podcast akho kungaba umsebenzi othusayo. Namathuluzi wokuqopha afana IGarageband ayihlinzeki kakhulu ngendlela yamathuluzi wokusebenzisa kahle - kufanele wazi ukuthi yini amakhono.
UTemitayo ungikhombe ngaku I-Auphonic, uhlelo lokusebenza olususelwa kuwebhu nakwekhompuyutha elilungiselela kokubili ukunotha nevolumu yomsindo wakho we-podcast. Ubuchwepheshe bungahle bujwayeze ithrekhi eyodwa lapho isikhulumi esisodwa sikhala kakhulu kunesinye… siyamangalisa. Ngikunikeze ukuhlolwa kokunye engikurekhodile futhi ngaxhunywa masinyane ngathenga zombili izinhlelo zokusebenza zedeskithophu - eyodwa yokwenza ithrekhi eyodwa kanye nenye yokwenza amathrekhi amaningi.
Inothi eliseceleni: UTemitayo wangibuza ku-podcast yakhe futhi kwaba yisikhathi esihle - lalela lapha.
The I-Auphonic Leveler uhlakaniphile I-Desktop Batch Audio File Processor ehlaziya umsindo wakho futhi ilungise umehluko wezinga phakathi kwezipikha, phakathi komculo nenkulumo naphakathi kwamafayela womsindo amaningi ukufeza umsindo olinganiselayo jikelele.
Kufaka phakathi Umkhawulo Weqiniso Weqiniso, okuqondiwe kokuvamile Amazinga Womsindo (EBU R128, ATSC A / 85, ama-Podcast, Iselula, njll.) Kanye nokuzenzakalelayo Ukuncishiswa Kwemisindo Nomsindo ubuchule obuphezulu.
I-Auphonic Leveler iyi itholakalela iMac OS X 10.6+ (64bit) futhiIWindows 7+ (32bit noma 64bit).
I-Auphonic Multitrack ithatha amathrekhi alalelwayo amaningi wokufaka, ihlaziya iphinde icubungule ngawodwa futhi ihlanganiswe futhi idale ukuxuba kokugcina ngokuzenzakalela. Ukulinganisa, ukucindezela kobubanzi obunamandla, ukugoqa, umsindo nokunciphisa i-hum, ukususwa kwe-crosstalk, ukudada nokuhlunga kungasetshenziswa ngokuzenzekelayo ngokuya ngokuhlaziywa kwethrekhi ngayinye. Ukujwayelekile kwe-Loudness nemikhawulo yangempela ye-peak isetshenziswa ku ukuxuba kokugcina.
I-Auphonic Multitrack iyi- eyakhelwe izinhlelo ezilawulwa kakhulu ukukhuluma futhi iyatholakala nge I-Mac OS X 10.6+ (64bit) kanye Windows 7+ (32bit noma 64bit).
Ezinye zezici ezinhle zokulungiswa komsindo zifaka:
Isilinganisi esivumayo: I-Adaptive Leveler ilinganisa ukwehluka kokuzwakalayo, yenze ithrekhi yonke ikhule kakhulu nokuningi.
Hlunga Iphasi Eliphezulu: Isihlungi Esiphezulu Sokususa amaza aphansi aphazamisayo kuthrekhi yonke.
Ukwehliswa Kwemisindo Nokwe-Hum: Lesi sici sisusa umsindo wangemuva kuthrekhi, noma ngabe kukhona ukuhlukahluka. Lesi sici futhi sisusa ngokuphelele i-hum yolayini wamandla ekurekhodweni.
I-Crossgate: Noma nini lapho umsindo ofanayo uqoshwa kumakrofoni ababili abahlukene, lesi sici sisebenzisa kuphela ithrekhi evelele. I-Crossgate nayo isebenza ukuqeda ngokuphelele imisindo ye-echo.
Bengilokhu ngisebenzisa zombili izinhlelo zokusebenza kakhulu futhi kufanele kwaziwe ukuthi abazenzi izimangaliso. Benginomsindo obabazekayo kwenye yama-podcast ami futhi, ngeshwa, ihaba alizange lincishiswe ngemuva kokuliqeda. Kodwa-ke, ngilithanda ngokuphelele leli sethuluzi lamathuluzi futhi ngibe nemiphumela emangalisayo ngalo kuze kube manje! Ngibonga iTemitayo!
Tags: Isilinganisi esivumayoUkusebenza komsindoi-auphonicumlinganisi we-auphoniciprosesa ye-auphonic multitrackI-CrossgateIsihlungi sePhasi EphakemeIzinga le-itunesithuluzi le-itunesamathrekhi amaningiUkuncishiswa Kwemisindo Nomsindoamathuluzi we-podcasttemitayotemitayo osinubiivolumu ithuluzi
Ungayiqopha kanjani i-Premium Quality Audio ngeWebhu